Muuri News Network » Maamulka gobolka Shabelaha Hoose oo kajawaabay cabasho kasoo yeertay dadka gobolkaas!!
Maamulka gobolka Shabelaha Hoose oo kajawaabay cabasho kasoo yeertay dadka gobolkaas!!
Maalmihii udambeeyay waxaa cabasho kasoo yeereysay qaar kamid ah shacabka kunool gobolka Shabelaah Hoose gaar ahaan wada xariirisa degmooyinka Marka oo ah xarunta gobolka Shabelaha Hoose iyo degmada Afgooye kuwaas oo kacabanayay in wadadaasi lagu dhibaateeyo.
Maamulka Gobolka Sh/Hoose ayaa ka jawaabay Eedeymo kaga yimaada Shacabka Shabeelaha Hoose gaar ahaan kuwa isticmaala Wadada isku xerta Muqdisho ilaa Marko ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Sh/Hoose Maxamed Xuseen Maxamed “Shiine” ayaa sheegay iney Eedeymahaasi iyo Isbaarooyinka ay ka warqabaan isla markaana Saacadaha soo socda ay ka jawaabayaan ayna qaadi doonaan talaabadii kuhaboon.
Dhowr jeer oo hore ayaa sidaan oo kale waxaa cabasho kasoo yeertay qaar kamid ah shacabka gobolka shabelaha Hoose walow maamulka uu qaaday isbaarooyinkii yaalay gobolkaas balse markii dambe ay dib usoo laabteen isbaarooyinkaas